Sotro ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Alikaola sy tsy alikaola
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Masakan'i Sri Lanka » zava-pisotro
Sotro ao Sri Lanka
30 Janoary, 2020
Sakafo tsy misy toaka
Ny bevony ronono
Rano Kôkôlà (Juice)
Ny zava-pisotro misy alikaola
Vodka avy amin'ny Arak Palm Juice
Sri Lanka zava-pisotro malefaka
Ny zava-pisotro malefaka any Sri Lanka dia tsy misy andrana lehibe na zavatra tena mahaliana na exotic. Saingy mbola misy zavatra manafoana ny hetaheta.
Ireto ambany ireto no lisitray ny zava-pisotro tsy misy alikaola be indrindra izay atolotra any amin'ny kafe sy trano fisakafoanana any an-toerana:
Tea miaraka amin'ny ronono sy Tibe
Ny zava-pisotro malaza indrindra any Sri Lanka dia dite mainty (Antsipirihany momba ny dite Sri Lanka eto). Ampiasaina matetika ny ronono sy ny ginger. Amin'ny fomba nentim-paharazana, dia tokony hatolotra amin'ny lovia porsinina. Miaraka amin'ny dite, ny Sri Lankans (toa antsika maro) dia tia mihinana muffins, mofomamy ary sakamalaho (masom-boasary malaza indrindra).
Labiera labiera - labiera labiera
Labiera labiera any Sri Lanka. Labiera labiera
Ny zava-pisotro tony mahazatra eto amin'ity firenena ity dia antsoina hoe "labiera ginger", izany hoe "labiera ginger" amin'ny teny anglisy. Na eo aza ny anarana dia tsy misy toaka ao. Ny tsiro amin'ity zava-pisotro ity dia voafaritra manokana, mitovy amin'ny voasarimakirana misy tsiro marevaka mamiratra.
Izy io dia zava-pisotro iray mitovy amin'ny tendron'ny ronono mahazatra, izay ampiasana ronono fa tsy gilasy. Ny zava-pisotro dia mahaliana tokoa.
Fisotroan'i Lassie any Sri Lanka (Lassie)
Mba ho zakan'ny ronono, ranom-boankazo vaovao na fifangaroan'izy ireo. Matetika dia voanazy, akondro, manga, mainam-pitiavana, papaya na watermelon.
Milkshake any Sri Lanka
Ny tenda ronono mahazatra any Sri Lanka dia atolotra amin'ny fomba mahazatra. Ny ronono sy ny gilasy dia ampiasaina ho toy ny fototra, ary ny voankazo eo an-toerana toy ny anana, mango, akondro sy ny hafa dia ampiasaina ho toy ny mameno tsiro.
Rano voanio Juice. Sri lanka
Iray amin'ireo fomba fanta-daza indrindra amin'ny famonoana hetaheta any Sri Lanka sy ny firenena hafa amin'ny SEA. Amin'ny fototra iankinan'izany, dia tsiranoka iray tsy mahasoa izay noforonina voajanahary ao anaty voaniho (voankazo voanio). Ary miresaka momba ny voaniho tanora isika, satria miaraka amin'ny fitomboan'ny voankazo, afangaro ao anaty rano coka ny menaka avy amin'ny rindrin'ny voaniho dia lasa mivadika ronono ny rano. Any Sri Lanka, ny rano fisotro iray dia antsoina hoe Tambili.
Ny fisotroana dia arotsaka amin'ny coke izay anaovana ny tampony, atao lavaka kely ary natao hanamorana ny mololo mahazatra (fantsona).
Ranom-boankazo misy zava-pisotro misy sako any Sri Lanka dia mety ho avy amin'ny voankazo
Any Sri Lanka, ny ranom-boankazo dia fotsifotsy mahazatra. Tsy bitrika am-boanjo ranom-boasarary, toy ny ranom-boankazo novoizina, fa voankazo kely natsipy tamin'ny blender iray fotsiny, tamin'ny fampidirana rano.
Amin'ny maha mpanentana voankazo azy, ny voankazo na ny mifangaro azy dia ampiasaina. Matetika indrindra ny lisitry ny kafe sy ny trano fisakafoanana dia manolotra ranom-boankazo vaovao avy amin'ny voankazo toy ny voan-kavina, ny paiso, ny papay, ny manga, ny sokay, ny akondro, ny voankazo maniry sy ny hafa.
Vaovao avy amin'ny paoma hazo (Wood Apple fresh)
Vaovao avy amin'ny paoma hazo. Paoma paoma paoma
Tena zava-pisotro hafahafa. Ny paoma hazo, toy ny akora fototra, dia tena be ao Sri Lanka ary saika tsy hita any amin'ny firenena hafa any Azia Atsimoatsinanana. Ny tsirony ihany dia manandrana mamy, ary vao ny afangaro dia afangaro amin'ny masira miaraka amin'ny ronono sy siramamy. Ny zava-pisotro vokatr'izany dia manandrana tsy mifanaraka amin'ny zava-drehetra, ary raha azo atao dia manandrana manandrana isika. 😉
Zava-pisotro misy alikaola any Sri Lanka
Amin'ny ankapobeny, ny toe-javatra misy ny alikaola eto amin'ity firenena ity. Azonao atao ny mividy azy manokana amin'ny fivarotana manokana izay misy famantarana miaraka amin'ny teny hoe "fivarotana divay". Ambonin'izany, ny fivarotana toy izany dia mamorona ampahany tsy dia misy dikany amin'ny fivarotana rehetra any Sri Lanka. Noho izany, hividianana toaka dia tsy maintsy mandeha any amin'ny tanàna manodidina ianao. Mampalahelo fa na dia amin'ny toerana fizahan-tany aza dia matetika tsy misy magazay misy zava-pisotro misy alikaola. Ary mifidy izy ireo tsy mihoatra ny 21.00. Noho izany, ny mpizahatany (afa-tsy ny teetotaler) dia mila mitobaka mialoha ny alikaola. Amin`ny fomba, ny fahazoana labiera mangatsiaka koa matetika mahomby. Ny fivarotana toy izany matetika dia misy vata fampangatsiahana, fa ny labiera dia tsy milay tsara.
Saika foana, isaky ny fivarotana toy izany dia mila mijoro ianao (niforona indrindra avy amin'ny mponina eo an-toerana), izay misy olona manambany izay manandrana mamakivaky ny filaharana. Ankoatr'izay, tsy afaka miditra ao amin'ny fivarotana toy izany ianao (am-baravarankely no amidy amin'ny alikaola, izany hoe raha ny marina dia tsy fivarotana ihany izany, fa trano fivarotana), tsy misy vidiny vidiny, noho izany dia mila manontany ny mpivarotra ianao hoe inona marina no amidy ary ohatrinona no mividy.
Ity ambany ity ny zava-pisotro misy alikaola malaza indrindra any Sri Lanka.
Bizina any Sri Lanka
Biriky «vola telo»
Birao "Vola telo" (vola madinika telo)
Ity labiera ity dia eken'ny maro an'isa ho toy ny labiera tsara indrindra ao amin'ny nosy. Tsara homarihina fa ny fototry ny famokarana dia vary. (ary inona no nantenain'i Sri Lanka? 🙂). Ie raha ny tena izy dia labiera vary. Ny haavon'ny alikaola dia 4,8%.
Tambajotra "Lion Lager Beer"
Bella Lion Lager.
Jiro labiera avy amin'ny mpanamboatra mitovy amin'ireo vola telo ireto. 4,8% ihany koa ny trano mimanda. Ny tena marina, toy ny "vola telo" no tena be mpitia eo amin'ny mpizahatany. Ao amin'ny laharam-pamokarana labiera eo amin'izao tontolo izao dia mahazo toerana mendrika 14.
Arak Palm Juice Vodka any Sri Lanka
Ahoana no atao
Ny arak-ny zava-pisotro misy alikaola any Sri Lankan dia amboarina amin'ny ranom-boaloboka voanio.
Ny katsaka dia voangona ao anaty boaty hazo matevina.
Ny ranom-boankazo dia misy masirasira ° ary, noho izany, manomboka "mirenireny" tsara atsy ho atsy, mamorona divay palmie "Toddy".
Ity divay, azon'ny «fermentation» voajanahary ity, dia manana tanjaka 5-7 ° ary iharan'ny "distillation" avo roa heny.
Aorian'ny «distillation» dia ny fisotroana vokana dia manana tanjaka sahabo ho 60 ° eo ho eo.
Ny vokatra vokarina dia arotsaka amin'ny rano hahazoana ny fatran'ny tanjaka maniry, aorian'izany dia iharan'ny filtration maro isan-karazany.
Raha ny marak'i Arak tsy dia lafo, ny alikaola dia ampiasaina ho fanafody fanampiny (ny soratra hoe "fahita" amin'ny tavoahangy dia manondro izany).
Arak koa tsy azo vidiana amin'ny alàlan'ny molaly misy siramamy ary mizana filtration kely (fanadiovana). Antsoina io Arak io Tena nampiaiky volana (Tena nampiaiky volana), ary tsy atolotra ny fampiasana, noho ny fahavoazan'ny voka-dratsy ratsy vokatry ny fanadiovana ny zava-pisotro kalitao.
Arak Palm Vodka any Sri Lanka
Ao amin'ny marika lafo vidy, ankoatra ny rano sy ny ranom-boaloboka voninkazo dia tsy misy azo ampiasaina. Antsoina io Arak io Special (Special).
Hifandimby kosa dia Arak Special no mizara ho karazana:
Nihaona Arak (Premium antitra) - Arak zokinjokiny amin'ny fatana hazo tamin'ny 12 ka hatramin'ny 18 taona. Ny zava-pisotro misy alikaola lafo vidy indrindra eny an-tsena. Miankina amin'ny fotoana fandefasana ny vidiny ary eo ho eo izy 10000 rupees.
Arak 15 taona
Fitaovana fanampiny fanampiny (tarika DCSL) - Ny Arak malaza indrindra hita amidy. Vidiny 1600 - 1800 rupe ho an'ny 0.75l.
Famandrihana fanampiny any Sri Lanka
VSOA / Mpampita tranainy manokana (tarika DCSL) 0,75l - 1,850 rup
Black opal arrack (tarika DCSL) 0,75l - 1,750 rup
VX arrack (Rockland) 0,375l - 1000 rup, 0,75l - 2,000 rup
Vat9 arrack (Rockland) 0,75l - 2,300 rup
Arrack Old Reserve (IDL) 0,75l - 2,200 rup
Misy ihany koa ny Arak tsiro. Toy ny fitsipika, Arak Special nentim-paharazana miaraka amin'ny fampidirana tsiro voajanahary (manga, voasarimakirana, voasary, voasary, voankazo maniry sy ny hafa):
White Dimond Arrack (IDL) 0,75l - 1,800 XNUMX rup.
Arrack Mango (Rockland) 0,75l - 1,000 XNUMX rup.
Fanjakana Arrack (Mendis) 0,75l - 1,200 - 1,700 XNUMX rup.
Ahoana ny fampiasana ny Arak any an-toerana
Ny Sri Lankans tenany mihitsy no saika tsy mihinana an'i Arak amin'ny endriny madio, aleony mifangaro amin'ny rano voanio, na labiera labiera, na amin'ny zava-pisotro malefaka hafa.
Rum any Sri Lanka
Ny zava-pisotro misy alikaola any amin'ny trano mimanda 40 ° dia tena mahazatra ao Sri Lanka. Mampiasa izany ny olona eo an-toerana rehefa mifangaro na misotro rano voaniho na lychee sy ranom-boasary.
Calypso Red Rum (IDL Calypso Red Rôma)
Kalypso Red rum. Red rum "Calypso" any Sri Lanka
Red rum no mariky ny tsaho malaza indrindra any Sri Lanka (vokarina ihany eto). Vita amin'ny fary fary sy ny ranon-tsondro mena izy io, noho ny fisotroana misy loko mena mamirapiratra.
Ny tsiron'ny mena mena dia mamy, manitra. Mivalom-bokatra ny famaranana.
Fortress - 40 °
Ny vidin'ny red red Calypso (mety tsara):
0.385l - 1300 rupees
0.5l - 1800 rupees
0.75l - 2600 rupees
Rockland Red Rum (Rockland Dark Red Rôma)
Rockland Dark Rum. Rockland Red Rum any Sri Lanka
Ny tsaho mena Rockland dia tsy malaza amin'ny Calypso. Ao amin'ny fanamboarany dia ampiasaina ho toy ny fototry ny fary ny siramamy, ary ampiana ny voaroy. Ny loko mifangaro dia volontany mena.
Ny tsiro dia malefaka, manitra, miaraka amin'ny fanamarihana malefaka amin'ny sôkôla.
Fortress - 38 °
Ny vidin'ny tsaho mena Rockland rum any Sri Lanka (mety ho)
0.375l - 1300 rupees
0.5l - 1700 - 1800 rupees
0.75l - 2800 rupees
White rum Calypso (IDL Calypso Silver White Rôma)
Kalypso Silver White rum. White Rum ao Calypso any Sri Lanka
Calypso White Rum dia zava-pisotro madio sy tsy misy loko.
Malemy ny tsirony miaraka amin'ny hanitra manitra fahana sy aorian'izay. Voasoratra ny voaniho.
Ny vidin'ny rumyp fotsy Calypso
0.375l - 1250 rupees
Rockland White Rum (Rockland Premium White Rôma)
Rockland Premium White rum. Rockland White Rum any Sri Lanka
Mamy ny tsirony, mamy, malemy.
Vidy Rockland White Rum
0.5l -1800 rupees
White Rum Mendis (Mendis Islandy White Rôma)
Mendis Island White rum. Rumy fotsy mendis any Sri Lanka
0,75l - 2,000 XNUMX rupees.
Ny herin'ny zava-pisotro dia 38 °.
Gin any Sri Lanka
Tsy malaza any Sri Lanka i Gin, fa mbola mety hita any amin'ny fivarotana mivarotra zava-pisotro misy alikaola izy. Ny tsirony dia tena mahazatra.
Ireo karazany telo dia malaza indrindra:
Rockland Dry Gin. Rockland Gin any Sri Lanka
ny vidin'ny 0,75l dia eo amin'ny 2700 Rup.
Rockland Lemon Gin. Rockland Lemon Gin any Sri Lanka
Mendis London Spice Lemon Gin
0,75l ny vidiny tokony ho 2,300 Rup.
Whisky any Sri Lanka
Tahaka ny Gin ihany dia tsy malaza any Sri Lanka, fa mbola hita any amin'ny fivarotana.
Ny marika whisky malaza indrindra any Sri Lanka:
Whisky Old Keg (Whisky taloha Keg)
Whisky Keg taloha. Whisky any Sri Lanka
0,375l - 1400 XNUMX rupees
0,75l - 2,500 rupees
Mendis Blended Choice Whisky
0,75l - 2,000 rup.